वर्चुलाइजेशन करियर को लागि सबै भन्दा बहुमूल्य प्रमाणपत्र | यो
20 अप्रिल 2017
आदर्श रूप मा, पर्ची अप कभी नहीं हुन सक्छ। धैर्यपूर्वक, त्यो समझदार छैन, विशेष गरी सञ्जालको दायरामा। कुनै पनि अवस्थामा, जब तपाइँ सामान्य मिश-म्याशमा भर्चुअलकरण ल्याउनुहुन्छ, तपाइँ सुरक्षाको तह समावेश गर्दछ! वर्चुअलाइजेसनले तपाईंलाई हालको ढाँचामा व्यापार नगरेको वा कुनै नयाँ नयाँ सेटअप खरीद नगरेसम्म धेरै अधिक केहि परीक्षण गर्न एक ढाँचा, कार्यविधि ढाँचा, उपकरण, र थप डिजाइन गर्न अनुमति दिन्छ जसले लामो ढोकामा काम गर्दैन।
नयाँ चीजहरू प्रयास गर्ने क्षमता मात्र तपाईंको हालको ढाँचाको निष्पक्षतालाई मात्र एक संगठनको रूपमा तपाईंको प्रवीणता वृद्धि गर्न सक्नेछैन। हामी असाधारण वर्चस्वकरण कसरी छ भन्ने बारेमा एक लामो समयसम्म जारी राख्न सकेनौं, तर हामी त्यसलाई VMware छोड्छौं।
Virtualizationn क्यारियर को लागि प्रमाणित प्राप्त समय
प्रमाणपत्र कुनै आईटी स्टारको पेशाको मूल टुक्रा हो। तिनीहरू तपाईंलाई पागल र बोल्टहरूसँग र सुरू गर्न मद्दत गर्दछ र विशेष गरी वर्चस्वकरणको वर्तमान प्रगतिको साथ, एक विशेषज्ञतामा। जहाँ तपाइँ बदल्नुहुन्छ, वर्चुअलाइजेशन आईटी क्षेत्रमा प्रयोग गरिँदैछ, सम्बन्धित प्रमाणपत्रहरू धेरै राम्ररी चिनिन्छन्।
प्रमाणपत्र तपाईंले केन्द्र र योग्यता स्तरमा फरक सम्बन्धी जीत लिनु पर्छ।
त्यहाँ त्यहाँ भर्चुअलकरण प्रमाणपत्रको ठूलो रकम छैन, तथापि कि समाचार उत्थान हुन सक्छ। प्रमाणपत्रको बारेमा रहस्यको एकदम पर्याप्त मात्रामा तपाईंसँग सानो क्षेत्रको विकल्प हुन्छ जब गायब हुन्छ। तपाईलाई वास्तवमा प्रयोग गर्ने वस्तुहरूलाई (वा प्रयोग गर्न आवश्यक छ) तपाईंको प्रमाणिकरण विकल्पहरू र आवश्यकताहरू लाई सिधा दिनुहोस्। यहाँ भर्चुअलकरणको उत्कृष्ट ब्रह्मामा पछ्याउन उत्तम सेन्टहरूको अंश हो।
जाहिर छ, भर्चुअलकरण प्रमाणपत्रमा उद्योग अग्रगामी VMware हो। हाम्रो साथीहरु VMware मा प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रहरू छन्, तथापि हाम्रो शीर्ष विकल्पहरू (फायदेमंदका लागि) उनीहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छनौटहरू हुन्।
यस अवसरमा तपाईले VCP-स्तर प्रमाणपत्र सम्म आफ्नो मार्ग काम गर्न सक्नुहुन्छ, vSphere6स्थापनाका साथ सुरु गर्नुहोस्। यो अधिक VMware को लागि प्रमाणीकरण को लागि अधिक छ र निश्चित रूप देखि आफ्नो समय को बिना उचित कुराहरु संग गति को गति र VCP प्रमाण को लागि आवश्यकता सिक्न को लागि औचित्य।
डाटा सेन्टर वर्चुअलाइजेशन (VCP6-DCV) प्रमाणपत्रले तपाइँलाई जानकारी दिनुभएको छ कि तपाईलाई क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
साथै, हाम्रो नजर VMware अनुकूलन7प्रमाणपत्रमा छ जुन दृश्यमा नयाँ छ। VMware ले अहिले v7 डाटा सेन्टर वर्चुअलाइजेशन प्रमाण प्रस्ताव गर्दैन, तर हामी चाँडै देख्न चाहन्छौं।
नेटवर्किंग जग्गार्नट सिस्को प्रमाणपत्र को एक वर्गीकरण प्रदान गर्दछ जुन वर्चस्वलाइजेशन एप्टिभर्स र जानकारी को शामिल गरेर प्राप्त गर्दछ।
* कृपया ध्यान दिनुहोस् कि सिस्को अहिले यसको डेटा फोकस परीक्षाहरूको ठूलो संख्यामा संशोधन गर्दै हुनुहुन्छ, जसको केही जुलाई जुलाई 3, 2017 मा इस्तीफा हुनेछ।
सिस्को प्रमाणित नेटवर्किंग एसोसिएट (CCNA) डाटा सेन्टर हो यो स्थान सचमुच सिस्को को लागि शुरू हुन्छ। यो प्रमाणले तपाईंलाई विशेषज्ञ र व्यावसायिक स्तर प्रमाणपत्रको लागि सेट गर्दछ, त्यसैले सिस्को भर्चुअलकरणको लागि तपाइँको प्रारम्भिक चरणको रूपमा सोच्नुहोस्।
सिस्को यूनिटेड कम्प्यूटिंग विशेषज्ञ प्रमाणीकरण सिस्को यूनिटेड कम्प्यूटिंग सिस्टम को मूलभूत तत्वहरु लाई शामिल गर्दछ र एक भर्चुअल डेटा डाटा शर्त को वास्तविक गर्न को लागी तपाईंको क्षमता परीक्षण गर्दछ। यो प्रमाणीकरण डोडोको लागि विधि जाँदैछ। यो जुलाई 4, 2017 जुलाई को इस्तीफा दिइनेछ, त्यस घटनामा तुरुन्तै तपाईंले यो प्रमाणन प्राप्त गर्न आवश्यक छ! यस अवसरमा तपाईले यसलाई इस्तीफा गर्नु अघि यो प्रेस गर्न सक्नुहुन्न, CCNP डेटा केन्द्र प्रमाण निर्धारित निर्धारित हो।
सिस्को प्रमाणित नेटवर्किंग प्रोफेशनल (CCNP) डाटा सेन्टर प्रमाणीकरण चार परीक्षाहरु मा आधारित छ र एक ब्रुट छ। त्यहाँ परीक्षा छनौटहरू छन् जुन तपाइँले तपाइँको प्रमाणको लागि निर्दिष्ट डिग्रीमा सबैभन्दा बढ्दो apropos तरिका छनोट गर्न अनुमति दिनुहुन्छ।
वर्चस्वकरणसँग सम्झौता गर्न माइक्रोसफ्टको तरीका ढाँचा संगठनमा निर्भर गर्दछ जहाँ तपाईं नेटवर्क निरीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ, सर्भर नियन्त्रण गर्ने, वा प्रोग्रामिंग ढाँचाको बावजूद। त्यहाँ दुई वा तीन प्रमाणपत्रहरू छन् जसले तपाईंलाई आफ्नो sysadmin र भर्चुअलकरण क्षमताहरू जडान गर्न मद्दत गर्नेछ।
माइक्रोसफ्ट प्रमाणित समाधान एसोसिएट (MCSA): विन्डोज सर्भर 2012 (वा विन्डोज सर्भर 2016) प्रमाणीकरण आईटी इकाई को लागि सबै प्रमुख माइक्रोसफ्ट प्रमाणपत्र को बीच एक स्टैंडआउट हो र तपाईंलाई Windows Server वर्चुअलकरण को अधिग्रहण गर्दछ। यो प्रमाण तीन परीक्षाहरु मा शामिल छ, जसमा सबै को परीक्षण गर्न को लागि कुख्यात छ। कुनै पनि मामला मा, यस औषधि को मदद गर्न सक्छन् जो चम्मच को चम्मच डाउन डाउन ले छ कि MCSA विशेषज्ञ स्तर को प्रमाणन को लागि आवश्यक छ।
माइक्रोसफ्ट प्रमाणित समाधान विशेषज्ञ (MCSE): क्लाउड प्लेटफार्म र इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रमाणीकरण दुई वा तीन कुञ्जी माइक्रोसफ्ट नवाचारहरू ठेगाना गर्दछ: अजुर र विन्डोज सर्भर भर्चुअलकरण। माइक्रोसफ्टको नयाँ प्रमाणिकरण ढाँचामा, तपाईसँग छनौटको पूलबाट परीक्षाहरू छनौट गर्ने मौका छ, तपाईले तपाइँको प्रमाणिकरण परिवर्तन गर्न मौका दिनुहुन्छ। तपाईं केवल एक परीक्षा पास गरेर एमसीईई खरीद गर्नुहुन्छ, तर त्यसपछि तपाइँ प्रमाणपत्र वर्तमान र वैध राख्न को लागी लगातार अर्को परीक्षा लिनु पर्छ।
Citrix वस्तुहरू आईटी व्यापारमा प्रमुख छन्, र त्यस अवसरमा तपाईंले ती चीजहरूसँग काम गर्ने काम समाप्त गर्नुभयो, Citrix प्रमाणपत्र तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। Citrix भर्चुअलकरण दृश्यमा एक दीर्घकालीन खेलाडी हो र तीन प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ जुन तपाईंले आफ्नो विशेषज्ञ विकासमा फोकस गर्नुपर्छ:
Citrix प्रमाणित एसोसिएशन - वर्चुअलाइजेशन (सीसीए-वी)
Citrix प्रमाणित प्रोफेशनल - वर्चुअलेशन (सीसीपी-वी)
Citrix प्रमाणित विशेषज्ञ - वर्चुअलाइजेशन (सीसीई-वी)
यी प्रत्येक कोर्टहरूमा सिटिट्रिक्सको नेतृत्वको वस्तु, XenDesktop मा ध्यान केन्द्रित हुन्छ, तपाईंलाई प्रगतिशील जटिल क्षमताहरू र वस्तुको जानकारीको माध्यमबाट लैजान्छ।
लिनक्स sysadmins, एक साथ सामेल! रातो टोपी वर्चुअलकरण प्रमाणीकरण को वर्गीकरण प्रदान गर्दछ जुन असाधारण रूप देखि sysadmins को लागि लाभदायक छ जुन धेरै विक्रेताओं देखि अनशुच्छा गरिएको छ। रातो टोपी प्रमाणपत्र को एक विशाल वर्गीकरण प्रदान गर्दछ, एक महत्वपूर्ण संख्या को वर्चुअलकरण शामिल छ, तर एक प्रमाण को रूप मा एक पूर्ण आवश्यकता को रूप मा उभिएको छ तपाईंको भर्चुअलकरण पेशा को तरीका को लागि।
यो रेड Hat प्रमाणित वर्चुअलाइजेशन प्रशासक (RHCVA) प्रमाणले तपाइँको लिनक्स भर्चुअलकरण व्यवसायलाई डेलिभेट गर्दछ र तपाईंको भ्वाइस र भर्चुअलकरण आधार, होस्टहरू र दर्शकहरूलाई Red Hat Virtualization प्रयोग गरी पठाउने र निरीक्षण गर्ने प्रमाण दिन्छ। The RHCVA त्यसै गरी ईन्जिनियर र आर्किटेक्ट स्तर प्रमाणपत्र पछि खोजी गर्न तपाईंलाई सेट गर्दछ।
यो ग्यारेन्टी प्राप्त गर्न दिशामा सीधा बढ्न कहिल्यै महत्त्वपूर्ण छ। सीट लिनुहोस्, के पहुँचयोग्य को खोजी गर्नुहोस्, र पत्ता लगाउनुहोस् कि तपाईको सबै भन्दा राम्रो आवश्यकताहरु के हो। केहि प्रमाणपत्र क्षमता को परिवर्तन स्तर मा आउँछ, एक राम्रो आदेश को प्रक्रिया को आवश्यकता मा ध्यान राखन को लागि अंतिम लक्ष्य को ध्यान मा राखन को आवश्यकता हो। एक खेल व्यवस्था प्रारम्भ गर्न तपाईंलाई समय र जीवनशैली छोड्न सक्छ, र हामीले क्लाउड र भर्चुअललाइजेसन प्रयोग गर्नु एक पेशा प्राप्त गर्न एक सभ्य प्रमाणिकरण मार्ग पनि राख्नु भएको छ।
चीजहरू के के गर्दैछन्, के तपाईं भन्नुहुन्छ कि तपाईं वर्चुअलकरण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
तपाईं को तिर लाग्नु हुन्छ: एक सर्भरले मात्र एक काम गर्ने ढाँचा चलाउन सक्दछ? वा, अर्को सर्भरले एक हाइपरवाइजर चलाउँछ जसले धेरै भर्चुअल मिसिनहरू बनाउँछ, जुन कामको ढाँचाको वर्गीकरणमा चलिरहेको छ जसले लगभग कुनै अतिरिक्त लागतमा सबै गम्भीर रूपमा कन्फिगर योग्य छन्? दोस्रो छनौट कुनै पनि सङ्गठनको लागि सबैभन्दा कुशल र व्यावहारिक हुनेछ। कुनै पनि मालिक तपाईंको पीढीको वरिपरि भर्चुअल बनाउन को लागी अनुकूलन र लागत पर्याप्तता को शोषण को लागि उत्साहित हुनेछ।
VMware, सिस्को, माइक्रोसफ्ट, सिट्रिक्स र रेड ह्याटबाट प्रमाणीकरण प्रसोधनले तपाईंलाई कसरी आफ्नो पीढीको वरिपरि भर्चुअल बनाउन सक्दछ। VMware ले ढिलो रूपमा दुई नयाँ प्रमाणपत्रलाई आफ्नो VMware प्रमाणित प्रोफेशनल7ट्रयाकमा छोडे VMware प्रमाणित व्यावसायिक7- बादल व्यवस्थापन र स्वचालन (VCP7-CMA) र VMware प्रमाणित प्रोफेशनल7- डेस्कटप र गतिशीलता (VCP7-DTM) तपाईंलाई उनीहरूका सबैभन्दा ताजा वस्तुहरू उकाल्न मद्दत गर्न।
पछि कुन प्रमाणपत्र खोजी गर्ने छनौट परेशान हुन सक्छ तर तथ्यांक गर्दा तपाइँ प्रमाणपत्रले लाभ उठाउनेछ र तपाइँको पेशाले तपाईंलाई ट्रयाकिङ्ग गर्न मद्दत गर्नेछ जसले पूर्ण रूपमा तपाईंलाई नेटवर्किङ मास्टरको रूपमा लाभ पुऱ्याउँछ। एउटा प्रविधिको काममा रहेका वस्तुहरूसँग सुरू गर्न हो। तपाईले अहिले नै चीजहरू गरिरहनु भएको आंकडाको प्रयोग गरौं जहाँ तपाइँ सुरू गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाइँको आफ्नै विशेष रुचि र भर्चुअल एडिशनको अग्रतामा तपाईंको उत्प्रेरित निर्णय गर्नुहोस्।
वर्चस्वकरण र क्लाउड दर्ता गर्दा तपाईंको प्रगतिमा बढि अन्तर्क्रिया गर्न विकास गर्न अगाडि बढ्छ, भर्चुअलेशनमा तपाईंको जानकारीले तपाइँलाई कुनै पनि बिन्दुमा कुनै पनि विचार गर्भधारणयोग्य स्थान मार्गको लागि तपाइँको संगठन थप खुला Openways को लागि महत्त्वपूर्ण बनाउँदैन।
वर्चुअलिअलाइजेसन तपाईं सँगै बढ्दै वा जारी राख्नुहुनेछ, किन यसको टुक्रा हुनुहुन्न?